FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ROTTWEILER - ALIKA
Royce (ankavia) ny alika kely Rottie amin'ny 5 volana miaraka amin'i Barracuda aka 'Cuda (ankavanana) ilay olon-dehibe Rottie amin'ny 3 1/2 taona— '' Cuda dia Rottie lava be ary milanja 139 pounds. Milanja 115 pounds i Royce fony izy 11 volana ary lava noho ny rahalahiny! Maniry aho fa i Royce dia milamina ary tsara fitondran-tena toa an'i 'Cuda, izay mandeha miasa amin'ny vadiko isan'andro. Tsy mila leash ary tena sariaka sy sosialy izy. Royce kosa dia boloky ny angovo. Bibidia tanteraka, nefa sariaka. Tsy afaka mipetraka mangina izy ary tia milalao amin'i 'Cuda, izay hifandray an-tsitrapo mandra-pahatongan'ny Royce hiampita ny tsipika ary hanentsina ny sofiny. Aza ady mihitsy eo amin'izy ireo, fa fantatr'i Royce ny fotoana hiverenany. Manantena fotsiny fa hisy fotoana sy faharetana hampilamina azy. Samy tiako izy roa ary tsy hanana karazana hafa intsony! '
Rottweil Metzgerhund - Alika mpivaro-kena
Ny Rottweiler dia manana vatana hozatra, matanjaka sy matanjaka. Ny loha dia malalaka amin'ny handriny boribory. Ny moso dia mivoatra tsara. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Mainty ny orona malalaka. Mainty ny molotra ary maizina ny ao am-bava. Ny maso salantsalany dia maizina sy amandy. Fantatra fa manana Rottweiler sasany maso manga na maso manga iray ary volontsôkôlà iray. Ity toetra ity dia tsy ekena amin'ny tontolon'ny fampisehoana ary tsy mifanaraka amin'ny fenitra an-tsoratra an'ny karazany. Ny sofina dia telozoro ary entina mandroso. Voaravaka mahazatra ny rambony. Naoty: tsy ara-dalàna ny rambon'ny docking amin'ny ankamaroan'ny faritra eropeana. Ny dewclaw any aoriana dia esorina matetika. Mivelatra sy lalina ny tratra. Fohy, mafy sy matevina ny palitao. Mainty izy ary misy harafesina manisy marika mahogany amin'ny takolaka, molotra, tongotra ary tongotra. Misy loko mena misy marika mavo. Misy ny tsy fahampiana amin'ny fototarazo volo izay mahatonga ny fandokoana ho maivana kokoa.
Rottweiler Alemanina vs. American Rottweiler: ny sasany milaza fa misy ny fiovaovan'ny Rotties, ny Rottweiler Alemanina ary ny Rottweiler Amerikanina. Rotties alemanina dia voalaza fa fohy kokoa, stockier ary manana loha lehibe kokoa, ary ny American Rotties kosa dia voalaza fa lava kokoa sy leggier nefa tsy misy lohany. Ny sasany kosa milaza fa Rottweiler dia Rottweiler ary tsy misy izany antsoina hoe Rottie Alemanina izany. Ny sasany izay nanambara ity adihevitra ity dia nilaza hoe: 'Rottweiler Alemanina dia teraka tany Alemana ary Rottweiler amerikana teraka tany Amerika.' Na izany na tsy izany, misy ny mpiompy miteraka fijerin'ny Rottweiler Alemanina izay lehibe kokoa sy mibahan-toerana, fa ny hafa kosa miteraka endrika amerikana Rottweiler, tsy dia misakana loatra.
Ny Rottie dia matanjaka, tony, mampiofana, be herim-po ary manolo-tena amin'ny tompony sy ny fianakaviany. Tsy mivadika sy miaro izy, hiaro mafy ny fianakaviany raha ilaina izany, toa tsy voan'ny fanaintainana. Matotra, mahonon-tena, be herim-po, matoky tena ary be herim-po, ity karazana ity dia mila tompona matanjaka saina, tony, nefa mafy orina ary mahazaka ny haben'ny amboa. Ny Rottie dia alika mpiambina voajanahary ary malemy paika. Tena manan-tsaina izy io ary nanaporofo ny maha-zava-dehibe azy amin'ny asa ataon'ny polisy, ny tafika ary ny fomba amam-panao nandritra ny taonjato maro ary azo zarina amin'ny fankatoavana amin'ny fifaninanana. Noho ny habeny dia tokony hanomboka ny fiofanana raha alika kely ny alika. Mila fitarihana maro ity karazana ity ary -piaraha-monina . Tsy ho faly voafetra ao anaty kennel na any an-tokotany izy io. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miaina miaraka amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo. Rehefa mahazo fitarihana tsy miova ny Rottweiler ary voaofana dia ho mpiara-milalao tsara ho an'ny ankizy izany. Hanaiky saka, alika hafa ary biby hafa ao an-trano izy raha mbola nifanerasera tsara ilay alika ary manana tompona manamafy ny fahefany amin'ilay alika. Ny mpinamana sy ny havan'ny fianakaviana dia raisina an-tsitrapo amin'ny fomba mazoto. Ny olon-tsy fantatra izay ahitan'ny alika ny fikasan-dratsiny dia tsy afaka mandeha lavitra noho ilay sisin-dalana.
Milanja: Lehilahy 95 - 130 pounds (43 - 59 kg) Vehivavy 85 - 115 pounds (38 - 52 kg)
Ity karazana ity dia mora tohina amin'ny fahasimban'ny ACL. Mora voan'ny dysplasia. Mora voan'ny entropion koa (mihalefaka ny elanelana eo amin'ny hodi-maso). Mirona mievona. Afaka mihinana be loatra.
Ny Rottie dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Ireo alika ireo dia somary tsy miasa intsony ao anaty trano ary ampy ny tokotany kely.
Mila fanatanjahan-tena be dia be ny Rottweiler. Tsy afaka manome asa be loatra an'ireo alika mahery ireo ianao na manao fanatanjahan-tena mivelona amin'izany. Mila entina isan'andro izy ireo mandeha na mihazakazaka . Ny fihazakazahana any anaty ala sy any an-kalamanjana dia tena mahafaly azy ireo ary tsy maniry ny hirenireny lavitra anao izy ireo. Ny milomano na mihazakazaka eo akaikin'ny bisikileta dia hetsika lavorary ho an'ity alika ity ary tiany koa ny mamerina baolina.
fifangaroan'ny dane sy bulldog mahafinaritra
Ny fako lehibe matetika dia mety hanana alika kely 10 - 12
Ny palitao malama sy manjelanjelatra dia mora karakaraina. Borosio amin'ny borosy mafy volo ary mandro raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Rottweiler dia mety ho avy amin'ny Italiana Mastiff , izay niaraka tamin'ny omby nentin'ny Romana niaraka tamin'izy ireo rehefa nanafika an'i Eropa. Nandritra ny Moyen Âge, izy io dia nampiasaina ho mpiandry omby, ho mpiambina, alika mpitondra hafatra, alika alika ary ho asan'ny polisy. Nihalehibe tao amin'ny tanànan'ny Aleman'i Rottweiler any Wurttemberg izany. saika lany tamingana tamin'ny taona 1800 dia nanomboka niverina ny isan'ny mponina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 noho ny ezaky ny mpiompy mafana fo mifantoka any Stuttgart. Tany Alemana tamin'ny 13 Janoary 1907, natsangana ny DRK (Deutscher Rottweiler-Klub (Alemanina Rottweiler Club)). Fotoana fohy taorian'ny 27 aprily 1907, niforona ny SDRK (Süddeutscher Rottweiler-Klub (South German Rottweiler Club)), izay lasa IRK (International Rottweiler Club). Napetraka avy eo ny fenitra Rottweiler. Ny karazana dia fantatry ny AKC voalohany tamin'ny 1931. Ny talenta sasany an'ny Rottweiler dia misy: ny fanarahana, ny fiandrasana, ny fiambenana, ny fiambenana, ny fikarohana ary ny famonjena, ny alika mpitari-dalana ho an'ny jamba, ny asan'ny polisy, ny fanaovana sarety, ny fankatoavana ny fifaninanana ary Schutzhund.
CRC = klioba Rottweiler Club
DRK = Club Rottweiler Alemanina
IRK = Club Rottweiler Iraisam-pirenena
Max ilay zanak'osy Rottweiler lahy eo amin'ny 7 herinandro eo ho eo— 'Ity no Rottweiler Max-ko. Izy dia aseho eto amin'ny 48 andro. Tena mpankato izy nefa somary mafy loha ihany koa. Manana angovo be dia be izy ka entiko mandeha atleast 3 mandeha isan'andro izy. Amin'ity sary ity dia mipetraka am-paharetana izy hamaky ny rakotra an'io atody nandrahoina mafy io, satria tsy vitany samirery izany lol. Tiako fotsiny izy. '
Bear, Rottie lahy iray 1 taona nijoro teo an-tokotany.
Mila ny alika Rottweiler amin'ny 5 volana
Eyk Vom Wendehammer SchHi ZTP, sary natolotry ny GLI Antichi Molossi Italia
Rottweiler Alemanina vehivavy amin'ny 12 volana
'Ity no lehilahy hozatra keliko, Chaos. 3 volana izy ary bandy kely mandanjalanja tsara. Tiany ny mandany ny fotoanany amin'ny filalaovana ny alika hafa ary azo antoka fa mandreraka azy izany. Ny quirk kely mahafatifaty dia ny handry tanteraka hisakafo. Miresaka momba ny angovo angovo :) Fanampiny tsara ho an'ny fianakaviana izy ary tsy andriko izay asehoy azy ny tady amin'izay izy afaka mihalehibe ho mpisolo vava lehibe! '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Rottweiler
Sary Rottweiler 1
Sary Rottweiler 2
Sary Rottweiler 3
Sary Rottweiler 4
Alika Rottweiler: sary an-tsokosoko voaangona
alika kely misy tongony mihohoka
manga heeler border collie mix alika kely
alikakely mpiandry ondry mainty sy mainty
mixer spaniel sy yorkie
pitbull orona mena volontany sy fotsy